Xiaomi ၏ဥက္က48္ဌသည် ၄၈ MP ကင်မရာပါသောဖုန်းတစ်လုံးစတင်ရောင်းချရန်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောတစ်နာရီကျော်က Xiaomi ၏ဥက္ကLin္ဌလင်းဘင်သည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်စတင်သည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ပုံရိပ်ကိုဝေမျှခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဖုန်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည် 48 megapixel ကင်မရာ.
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစမတ်ဖုန်း၏အမှတ်အသားကိုခန့်မှန်းရန်စောလွန်းသေးသည်။ ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက် panel ကဖန်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒေါင်လိုက်ကင်မရာတည်ဆောက်ပုံအောက်တွင် '48 MP Camera 'စာသားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထင်မြင်ချက်များသည်လာမည့်ကာလ၌ကြာမြင့်စွာမရှိသေးပါ။
ဖုန်းတွင်သုံးဆသို့မဟုတ်ကင်မရာနှစ်လုံးရှိမရှိမသေချာပါ။ 48 megapixel ကင်မရာအတွက် dual-tone LED flash ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဖုန်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များကိုလည်းပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Xiaomi ဖုန်းသည်အာရုံခံကိရိယာကိုတင်ပြနိုင်သည် ၄၈ megapixel Sony IMX586 ဒီနှစ်ဇူလိုင်လမှာဒါမှမဟုတ်အောက်တိုဘာလမှာကြေညာခဲ့တဲ့ ၄၈ megapixel Samsung ISOCELL Bright GM1 အာရုံခံကိရိယာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Sony သည် IMX48 နမူနာများကိုစက်တင်ဘာလတွင်စတင်တင်ပို့ခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ ISOCELL GM586 ကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အားကောင်းသောပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Xiaomi သည်ကင်မရာဌာန၌အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်။ သို့သော်ယခုအခါတရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည် ၄၈ megapixel ကင်မရာဖြင့်စမတ်ဖုန်းကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ကင်မရာဌာနရှိဘားကိုမြှင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင် Xiaomi ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး 5G ဗားရှင်းဖြစ်သည် mi MIX 3။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူက Q2019 48. ကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည် Mi ရောနှော35G၊ Mi MIX3နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်အရာခပ်သိမ်းစောင့်နေရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi ၏ဥက္က48္ဌသည် ၄၈ MP ကင်မရာပါသောဖုန်းတစ်လုံးအားစတင်ရောင်းချရန်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
Apple ဟာ Android Music အတွက် Apple Music version ကိုတီထွင်နေပါတယ်